Olee otú Iji Nweta Iji Tomorrowland Site Train | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú Iji Nweta Iji Tomorrowland Site Train
(Emelitere ikpeazụ On: 14/08/2020)
Ọ bụrụ na ị na-eche otú iji Tomorrowland ụgbọ okporo ígwè, ahụ anya ọzọ. Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè Tomorrowland n'ọdịnihu na anyị! Ọ bụrụ na ị na na na nae nke kechioma ndị mmadụ nwere tiketi ka Tomorrowland afọ a, Gbalịa hụ na ịhapụghị nkọwa njem njem na nkeji ikpeazụ!
Mgbe bụ Tomorrowland?
Ọ gaghị adị ogologo oge ruo mgbe ememme kicks apụ, yabụ gbaa mbọ hụ na akwadoro gị na Tomorrowland site na tiketi ụgbọ oloko. Tomorrowland na-ewere ọnọdụ na ngwụsị izu abụọ maka 2018. Ọ bụ ihe ikpeazụ abụọ izu ụka na July: 20-22nd na 27- 29nke. The Ịchịkọta, nke bụ tupu ememme omume maka campers na Dreamville, na-ewe ebe on July 19 na mgbe July 26 maka izu ụka 2.
Access Iji Tomorrowland site Train:
Access ememme bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na ị nwere nti Tomorrowland mgbaaka aha gị aha.
Brussels ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Antwerp ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Liège ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Charleroi ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Na Fraịdee & Saturday, ịlele-in bụ na-emeghe ruo mgbe 22h00. Access ga-agọ mgbe a.
On Sunday ego-na-emechi na 21h00. Access ga-agọ mgbe a.
Tomorrowland bụ enweghị mgbagha mmemme egwu kacha mma n'ụwa. Ọtụtụ mba nọ na Tomorrowland karịa n'egwuregwu Olympic. Ọ bụ n'ezie a ahụmahụ pụrụ iche na n'ụzọ zuru okè na-adị ejikọrọ. Kwa afọ ọ na-etolite ọbụna ibu, n'ihi ya, anaghị na-akarị ha ìgwè mmadụ ahụ site n'ịdị na-adịghị njikere, banye na Tomorrowland site na ụgbọ oloko.
Olee otú Iji Nweta Iji Tomorrowland Site Train:
Tomorrowland-ewe ke ntụrụndụ ebe, de Schorre, na Ọganihu. Obodo Boom dị n'ime Belgium, n'etiti Antwerp & Brussels. Nke a obere obodo-agbanwe n'ime a party idaha. Na-emekarị a obodo dị jụụ ha na-egosipụta na Tomorrowland flags na ha windo n'oge ememme.
The kasị mma isi ebe na-esi na Tomorrowland site Train bụ iji Antwerp Central. Ozugbo ị na-ebe a ị na-aga chọrọ inwe ụgbọ okporo ígwè ọzọ ka Ọganihu.
Gaa na ọdụ ụgbọ elu ma buru ụgbọ ala ụgbọ ala efu na Tomorrowland / DreamVille. Mgbe ọ bụla n'ụbọchị ememme, atọ ọzọ n'abalị ụgbọ oloko ga-agba ọsọ ka Antwerp Central Station.
NEW: on weekdays, e nwere ugbu a 2 ụgbọ oloko kwa hour n'etiti Antwerp-Central na ọganihu. On Saturday na Sunday: 1 oloko kwa hour.
Rotterdam ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Paris na Ọganihu Ụgbọ oloko
Maastricht ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Amsterdam ka Ọganihu Ụgbọ oloko
Gịnị Bụ Tomorrowland Dị?
Ugbu a na anyị nyere gị mma nkọwa na Tomorrowland site Train, ọ bụ oge maka fun akụkụ! Ọ bụrụ na ọ bụ gị na mbụ na-aga Tomorrowland, ị na-eleghị anya na-eche ihe ọ na-aga dị ka. Tomorrowland bụ maa kwesịrị mama na e kere gburugburu ya. Tomorrowland e tozuru oke agbagha kasị ukwuu EDM music ememme na ụwa ruo ọtụtụ afọ na-agba ọsọ. Eleta dịkarịa ala otu n'ime otu ndụ aghọwo a kwesịrị maka ihe ọ bụla music ofufe, party goer ma ọ bụ ememme enthusiast. Tomorrowland 2018 na -akpụzi ka ọ bụrụ nke kachasị na akụkọ ememme ahụ. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya n'ezie nke ndị na -ese ihe nkiri mba ofesi mara mma ga -agbado ọkụ 16 ịrịba nkebi.
E wezụga na-enwe ihe ịrịba lineup, ndị na-ahazi yiri ka echiche nke ihe niile, tinyere igbe i nwere ike iku, ebe ana ekwentị gị na ọbụna ha onwe ha ego na-akpọ nkume pel. Ị nwere dị iche iche nhọrọ elu-elu gị mgbaaka na nkume pel: Ịnwere ike ịgbakwunye Pearls n'ịntanetị na ekwentị gị Tomorrowland Account, na taabụ 'My mgbaaka’ tupu ememme na gị kaadị (visa, MasterCard), Bancontact, Sofortüberweisung ma ọ bụ iDeal. Nke a na -aghọ n'ezie ebe ị nwere ike ịhapụ nchegbu gị niile!
Anyị nwere ike ikwu na ị na-eso Tomorrowland on Facebook na-mmelite lineup na ememme n'ozuzu, na i nwere ike na-eso Zọpụta A Train Twitter
Maka ihe ọ bụla European gbaa ụgbọ okporo ígwè, karịsịa, Tomorrowland site Train nile Europe, dị banye Tinye Weebụsaịtị Zụọnụ ma nwee obi ụtọ na ụgbọ oloko gị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftomorrowland-by-train%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / nl na / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
ọganihu Brussels Tomorrowland njegharị